Simba reinjiniya zvigadzirwa uye zvigadzirwa Fekitori | China Simba reinjiniya zvishandiso uye zvigadzirwa Vagadziri, Vatengesi
XLPE yakavharirwa simba tambo yakakodzerwa nekugadzika yakatarwa musimba kutapurirana uye kugovera mitsara ne AC 50HZ uye yakatemwa magetsi e0.6 / 1kV～35kV
Rated Voltage: 0.6 / 1kV ~ 35kV
Muimbisi zvinhu: mhangura kana aluminium.
Qty yemacores: single core, maviri cores, matatu cores, mana cores (3 + 1 cores), mashanu cores (3 + 2 cores).
Mhando dzetable: isina-armored, mbiri simbi tepi yakashongedzwa uye simbi waya yakashongedzwa tambo
yakadzika kana yepakati voltage pamusoro wedenga emuchadenga bundled conductor aluminium ABC tambo pamusoro tambo
Aerial Bundle Kondakita (ABC tambo) ipfungwa yakasarudzika yekumusoro kwemagetsi kugovera kana ichienzaniswa neyakajairika isina conductor pamusoro pekugovera system. Inopa yakakwira nhanho yekuchengetedza uye kuvimbika, kudzikira kwemagetsi kurasikirwa uye yekupedzisira system hupfumi nekuderedza kuisa, kugadzirisa uye mutengo wekushanda. Iyi sisitimu yakanakira kugoverwa kwekumaruwa uye inonyanya kukodzera kumisikidza munzvimbo dzakaoma senge nzvimbo dzine makomo, nzvimbo dzemasango, nzvimbo dzemahombekombe etc.
Tambo dzemagetsi dzePVC (tambo yemagetsi epurasitiki) ndeimwe yemhando yepamusoro zvigadzirwa zvekambani yedu. Chigadzirwa hachina chete kugona kwemagetsi kwakanaka, asi zvakare chine kugadzikana kwakanaka kwemakemikari, chimiro chiri nyore, nyore kushandisa, uye kuiswa kwetambo hakuganhurwe nekudonha. Inoshandiswa zvakanyanya pane iyo shanduko yedunhu iyo yakayera magetsi ndeye 6000V kana pasi.
1. jenareta yakatarwa kushandiswa High-mhando simbi vari ukobvu kanopi - 2mm kusvika 6MM
2. Yakashongedzerwa nehupamhi hwehuwandu hweizwi-rinotora zvinhu - kurira kwekurira, kudzivirira moto.
3. Jenereta yakagadzirirwa 12V / 24V DC bhatiri inejaja, bhatiri rinobatanidza waya.
4. Jenareta rakagadzirwa ne10 - 10 maawa peturu yetangi ine mafuta chiratidzo, nguva yakareba yekushanda.
Simba rekugovera kabhodhi nhepfenyuro inokodzera AC 50 Hz, yakatemwa magetsi kusvika ku0.4 KV simba rekuparadzira uye nzira yekuparadzira. Iyi nhepfenyuro yechigadzirwa musanganiswa we otomatiki muripo uye simba rekugovera. Uye inova inyowani mumba nekunze kumanikidza kugovera kabhodhi yemagetsi leakage dziviriro, simba metering, pamusoro-pari, pamusoro-kumanikidza yakavhurika chikamu dziviriro. Iyo ine mabhenefiti eiyo diki vhoriyamu, kuiswa kuri nyore, mutengo wakaderera, kudzivirira magetsi-kubiwa, kuchinjika kwakasimba, kuramba kukwegura, rakakodzera rotor, hapana muripo wekukanganisa, nezvimwe.